Etu esi emepe a Cannabis Dispensary na Illinois? Gụọ ihe niile gbasara ya ebe a.
Etu esi emepe Dispensary afọ?
Imepe aziza cannabis bụ nrọ nke ọtụtụ ndị na-eme ka ahịhịa ndụ na-acha ọkụ na ike nke cannabis dị ka ọtụtụ na steeti na-enwetakwa nkwado iwu. Azụmahịa THC cannabis ga-eto site na ihe dịka Billion 20 na 2020 ruo 80 Ijeri site na 2030 ka steeti na-arịwanye elu. Taa, anyị ga-elebanye anya na ịmepe oghere cannabis na ahịa Illinois na-apụta.
Na 2019, Illinois ghọrọ obodo nke iri na otu nke nyere iwu cannabis ntụrụndụ iwu. Ọ bụkwa obodo mbụ mezuru nke a site na iwu. Enwere ugbua akwụkwọ ikike izizi ọgwụ ikike 11 na steeti ahụ, ebe ọ dị na iwu ọgwụ cannabis bụ iwu site na 55.
Illinois ga-enye ndị na-achọ akwụkwọ ikike maka ntụrụndụ cannabis 75 maka ntụrụndụ ọhụụ tupu Mee 2020, na ngwa ndị emere site na Ọktoba 2019. Site na ego ha ga enweta site na nkesa cannabis na ijeri ijeri dollar na ịrị elu, mmepe ndị a na-eweta ohere dị oke egwu. Ka osila di, imeghe na igba ogwu cannabis bu ihe itu ahia na aka ike.
Imepe ulo mkpoputa achoro ichebara echiche, ikwe otutu iwu na onu isi obodo. Ọ bụrụ n’inwere ihe ọ na-ewe, nke a bụ ntuziaka zuru oke gbasara otu esi emepe oghere na Illinois.
1. Kwadebe Atụmatụ Azụmaahịa
Kedu ajụjụ kachasị mkpa atụmatụ azụmaahịa cannabis ga-aza?
Ego ole ka ị ga-emepe nkesa nke mkpụrụ osisi cannabis?
Ga-achọ atụmatụ azụmaahịa ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịmepe oghere cannabis na Illinois. Enwere ọtụtụ akụkụ nke atụmatụ azụmahịa gị kwesịrị ikpuchi. A kọwara ihe ndị a n'ụzọ zuru ezu n'okpuru:
Nkọwapụta Ahịa / Ọrụ - Nke a gụnyere otu esi eme atụmatụ iji mee ka ngalaba cannabis na akụkụ pụrụ iche gbasara ya. Gbalịa ịkọwapụta gị otu o kwere omume. Denye nkọwa banyere ụdị ifuru ị ga-ewepụta na ebe ị ga-enweta ha.
Nchọpụta Ahịa - Akụkụ a gụnyere ụzọ iji iji chọpụta ndị ahịa gị lekwasịrị anya na otu data a ga-esi metụta ahịa gị, ọrụ gị na ọnụahịa gị. Jiri nọmba ọnụnụ mgbe niile (nke ndị nke atọ mere iji aka gị kwụọ ụgwọ) karịa atụmatụ.
Ndị asọmpi - gụnyere nkọwa zuru ezu na azụmaahịa ndị ọzọ ị ga - asọrịta mpi, ozugbo ma ọ bụ na-enweghị isi. Kedu ihe bụ ike ha na adịghị ike ha, kedu ka ị ga - esi mee atụmatụ iche na azụmahịa gị.
Otu Onye-isi ndu - Akụkụ a gụnyere nchịkọta nke ntozu gị yana nke ndị otu nchịkwa gị. May nwere ike itinye ahụmịhe mmepe azụmaahịa na mpaghara ndị ọzọ, ikike iduzi ma ọ bụ ọrụ ndị ahịa.
Mmefu ego - Akụkụ a nwere ike ịdị egwu. Ọ na-agụnye ịhazi oke mmefu ego doro anya. Kwesịrị ịgụnye ogologo oge (kwuo afọ 5) amụma ego nke gụnyere mmefu arụmọrụ, uru net na ego ha na-enweta kwa afọ.
A na-ebu amụma amụma ego na-enweta site na ịlele ụdị ngwaahịa ị chere na ị ga-ere ego nke nrụpụta, ọnụahịa azụmaahịa na mmeju ọnụ (akwụ ụgwọ, ụgwọ ụlọ, ụgbọ njem, wdg). Nwekwara ike itinye mgbakwunye nyocha, na usoro iheomume ruo mgbe uru.
Ihe ndị akọwapụtara na Illinois - may nwere ike itinye nkọwa gbasara ikpuchi sistemụ nchekwa gị, njem ngwaahịa echedoro, nyocha ngwaahịa, atụmatụ mkpofu na ihe ndị ọzọ chọrọ. Mara na enwere ike itinye ha na ngwa gị.
Ndị na - achụ ego (Investor Providence) - Na - etinye ọnụ otu ị ga - esi were mbak gị ọfụma ma ọ bụrụ na ị gosipụtara ndị ntinye ego gị atụmatụ gị. Gwa onye CPA iji hụ na ị na-agbaso ụkpụrụ steeti na gọọmentị etiti.
2. Nweta ikike ikike azụmaahịa Cannabis
Licensenweta akwụkwọ ikike azụmaahịa na Illinois, ma ọ bụ steeti ọ bụla nwere ike isi ike ma dị ọnụ. Ndi Illinois Department of Financial and Professional Regulation (DFPR) ka enyere ikike inweta ikikere cannabis na Illinois. Onwere ihe ndi choro maka ndi ulo oghe.
Ndị tinyere akwụkwọ ga-enyocha nyocha nke ndabere, wepụta ụtụ ego zuru ezu maka afọ gara aga wee kpughere nkwanye ụgwọ ọ bụla ma ọ bụ mmejọ ọ bụla na mgbazinye ego ụmụ akwụkwọ, ego alim ma ọ bụ nkwado ụmụaka. Ga-enyefe akwụkwọ ikike ịnwe ụlọ ọrụ na-ekesa akwụkwọ ikike iji n'aka ndị okenye yana yana akwụkwọ nde $ 5,000 na-enweghị nkwụghachi. Ozugbo ị natara akwụkwọ ikike, enwere ego $ 30,000 maka ọnwa iri na abụọ izizi.
Imeghari ikike nnabata kwa afọ na-efu $ 30,000. Achọkwara ka igosi $ 50,000 na escrow ma gosipụta isi okwu zuru oke. Rịba ama na enwere ụgwọ ụgwọ ndị ọzọ metụtara ijikwa nkesa cannabis.
Ndị a gụnyere ụgwọ ndebanye aha ndebanye ndebanye $ 25,000 na $ 50 (onye ọ bụla) na-ekesa onye na-ahụ maka mgbapụta, onye na-anọchi kaadị azụmaahịa na ụgwọ nnọchi aha. Ikikere ikike nke cannabis na-adabere n'ụkpụrụ isi 250. N'okpuru ebe a bu uzo ufodu eji eme ihe a.
Nche na ndekọ
Atụmatụ azụmaahịa, ego, atụmatụ ala na atụmatụ arụmọrụ
Ozu ike nke atụmatụ ọzụzụ mmadụ
Ihe omuma omuma nke cannabis
Atụmatụ iche iche
Oru aka oru na oru
Ọ dị mma ịmara na ị ga-emefu ego buru ibu na usoro nnabata, ịkwesịrị ịme atụmatụ maka nke a.
Ichoro imepe akwukwo
3. Chọta Ọnọdụ Kwesịrị Ekwesị Maka Oge Disemba Gị
E nyere ikike ikikere azụta ntụrụndụ 75 nke ndị mmadụ ga-enye na Illinois n'ime mpaghara 17 Bureau nke Labour Statistics (BLS) na steeti. Emere nke a iji hụ na ezigbo mpaghara cannabis na-ekesa. Ihe nke a pụtara bụ na a ga-anọ na mpaghara BLS zuru ezu na ngwa ikikere gị.
Ozugbo enyere ikike gị, ị ga - enwe naanị ọnwa 6 (180 ụbọchị) ịhọrọ ọnọdụ anụ ahụ maka ụlọ ahịa cannabis na-ekesa akwụkwọ ahịa. Ọnọdụ ahụ aghaghị iru ihe ụfọdụ a chọrọ. Ha zuru ezu n'okpuru:
Kwesịrị ịdị mma maka ịnweta ọhaneze
Ekwesịrị inwe okirikiri nhọrọ ukwuu nke na-eme ka cannabis nwee nchebe dị mma
Ga-ezuru nha, ọkụ ọkụ, oke ike, njikwa ngwaahịa na nchekwa
Must ga-enwerịrị ebe a na-adọba ụgbọala na ebe ndị nwere nsogbu ga-abanye ma na-apụ apụ.
Ekwesịghị ịdị n'etiti 1,000 ụkwụ nke ebe cannabis ọzọ, ụlọ akwụkwọ, mpaghara obibi ma ọ bụ ebe ofufe.
N’inye iwu ndị a, ịmalite mkpesa mkpesa nwere ike ịkwụ ụgwọ $ 300,000 ruo 1 nde dabere nha, okirikiri na ịdị mgbagwoju anya. Ọ dịkwa mkpa ijide n’aka na onye nwe ebe ị ga-enweta ebe ọ dị mma na azụmaahịa azụmahịa. Ownersfọdụ ndị nwere akụ nwere ike ghara ịkwado azụmaahịa metụtara ọgwụ n'ihi mmebi iwu etiti, ụgwọ nwere ike ma ọ bụ nrụgide site na mmanye iwu.
4. Nweta Ngwaahịa Gị
Dika iwu Illinois, achoro uzo cannabis iji nye onyinye nke ngwaahịa sitere na ngalaba oru cannabis di iche iche. Ndepụta Ngwaahịa dị maka ire ahịa gị site n'aka otu onye ọrụ ubi agaghị agafe 40% nke ngwakọta gị. Nke a na - enyere gị aka na ndị ahịa gị nwere ụdị dịgasị iche iche zuru ezu. Ọ na - emekwa ka ndị na - azụ ihe ghara ịkwakọ ngwaahịa ha ozugbo ha mechara ụlọ ọrụ.
Statesfọdụ steeti chọrọ ka ndị na-ezipụ akwụkwọ ga-eto cannabis ha. Luckily, nke a abụghị ikpe maka Illinois. Agbanyeghị, ị nwere ike lekwasị anya ebe ịtọlite ​​ebe ịkụ azụ ga-amalite. Ọ bụ ezigbo omume ịme ka cannabis gị n'ụdị dị iche iche. Ndị ahịa dị iche iche ga-ahọrọ ngwaahịa dị iche iche dịka oriri, isi nri, dabs ma ọ bụ mmanụ.
5. Zụọ ahịa mkpokọta Cannabis gị
Azụ ahịa gụnyere ikpebi ihe ga - eme ka azụmaahịa gị dị iche na otu i si eme ka ndị ahịa mara nke a. Agbanyeghị, ịre ahịa cannabis nwere ihe dị iche iche ọ ga-abụrịrị ịmara gị. Na Illinois, ị nweghị ike itinye aka na azụmaahịa na-eduhie ma ọ bụ na-agha ụgha, na-akwalite ị overụ oke mmanya, na-agụnye onyonyo nke akwukwo ma ọ bụ nwa osisi ma ọ bụ na-egosi uru ngwaahịa a.
Maynwekwara ike ịme nkwupụta ọgwụ ma ọ bụ ọgwụgwọ banyere ngwaahịa gị ma ọ bụ jiri ihe osise nwere ike ịmasị ụmụaka (eserese, anụ ụlọ ma ọ bụ ihe ụmụaka). Ọzọkwa, ịnweghị ike ịkpọsa kesaịtị gị na redio, telivishọn ma ọ bụ n'ụgbọ njem ọhaneze. Egwuregwu ngwa ahịa kachasị mma maka nkesa cannabis gụnyere weebụsaịtị, social media, ngwa mkpanaaka (Leafly and Weed Map), akwụkwọ akụkọ na mmemme iguzosi ike n'ihe / ntụgharị.
Ihe choro maka ịzụta wii wii nke iwu kwadoro na Illinois na Dispensary
Na 2013, steeti Illinois mere ka wii wii nwee ike ị mariụ wii wii ọrịa maka ọnọdụ ahụike dị iche iche. Steeti ahụ hiwere usoro ịnya ụgbọ elu wee kpọọ ya Nnọgharị Ahụ Ike nke Ahụike Ahụike. Edere aha ndekọ ndị ọrịa yana ndị ọrịa ruru eru yana ndị nchekwa ha akpọrọ ka a ga-echebe site na ikpe na njide.
Ọ bụ ugbu a 2019 na steeti na-eme ka wii wii dịkwuo mfe ịnweta. A ga-atụnye ụgwọ iwu ga-eme ka ndị mmadụ nwee ike ịzụta, na-ere ma na-ere wii wii nke ntụrụndụ. Gwọ ahụ, nke bụ mmegharị nke iwu gara aga gbasara marijuana ga-ahazi wii wii otu ụdị mmanya na-aba n'anya ma kwe ka ndị mmadụ gafee afọ iri abụọ.
The Iwu Cannabis Iwu Iwu & Taxtụ Ọrịa akọwapụtara ụdị onye ahịa ga-ahapụ ya ka ọ ga-aga. Ndị bi na Illinois ga-enwe ike ịzụta marijuana maka nzube ntụrụndụ mana yana usoro ndị a;
1. Gosi ihe ngosi nke afọ tupu ịzụrụ ihe.
2. Ire, ịnyefe ma ọ bụ nkesa wii wii ka ga-anọgide bụrụ ịta gị ntaramahụhụ.
3. Drikwọ ụgbọ ala n'okpuru ike cannabis ga-abụ ihe iwu akwadoghị.
4. A ga-ere ire cannabis n'ụzọ iwu kwadoro site na ịtụ ụtụ amaala.
5. A ga-anwale cannabis ma kpọọ ya aha n'ụzọ dabara adaba maka uru onye ọrụ ahụ.
6. Ihe ndi n’ere ahia gha enweta ya site na ihe omuma nile putara banyere ihe ojoo emere nke anwansi jiri ya site na nyocha na-egosi.
Atụmanya nke azụmahịa na-aba ụba
Site na iwu ọhụrụ a ga-amalite n’oge adịghị anya, ọ bụ naanị oge tupu ụlọ ọrụ cannabis etolite na ụlọ ọrụ nwere ọtụtụ ijeri. Ndị obibi nwere ike iji ikike dị iche iche enyere ha maka ndị na-azụ ụlọ na ndị nwe ebe obibi. Goga n'ụkpụrụ iwu iwu ọhụụ ọ bụ ezigbo atụmanya na Illinois nwere ike bụrụ ngwa ngwa cannabis ebe na-enweghị ịkọ ihe ga - eme ka ohere ọhụụ dapụtara.
Kedu ka ị ga-esi nweta akwụkwọ ikike nkesa na Illinois
Enwere ụdị ikikere atọ n'okpuru ụdị onye nkesa na-akọwapụta ụzọ ndị mmadụ azụmaahịa ga-esi nye marijuana steeti. Atọ gụnyere;
1. Nkwenye izizi nke ndị okenye iji nweta ikike.
2. Ikike Nkesa Okenye Ọnọdụ.
3. Akwụkwọ ikike iziga ọgbakọ maka ndị okenye dịka akpọrọ ikike nnwere onwe.
Ntuziaka maka akwụkwọ nnabata izizi nke ndị okenye.
Nke a bụ akwụkwọ ikike maka ndị asambodo cannabis nyere asambodo nke enyere n'okpuru Mmemme assgwọ Ahụ Ike Ọgwụ Cannabis. Iji tinye akwụkwọ maka ndị na-achọ akwụkwọ ikike, ha ga-akwụ ụgwọ ngwa maka $ 30,000 (anaghị akwụghachi ụgwọ). A ga-achọkwa gị ka ego akwụghị ụgwọ maka azụmaahịa azụmahịa cannabis nke na-abụghị nkwụghachi. A ga-akwụ ụgwọ ego ahụ na 3% nke ire ahịa nkesa nke ọnwa ahụ rue ọnwa Julaị 2018 rue July 2019 ma ọ bụ ego atọrọ nke $ 100,000 ma ọ bụrụ na pasent ịkwụ ụgwọ karịrị ego a. Ọ ga-enwekwa ike igosipụta njirimara maka Atụmatụ Nsonye Mmekọrịta Social.
Ntuziaka maka akwụkwọ ikike iji ekesa akwụkwọ ikike iji eme ihe
A na-enye ikike ahụ site na iji usoro akpọrọ nke enyere ndị na-achọ ọkwa dị elu na ikikere. Ọ dị mkpa iburu n’obi na akwụkwọ ikike ahụ anaghị anabata ire ma ọ bụ zụta cannabis ma ọ bụ ngwaahịa ndị enwere cannabis. Ndị nwetara akwụkwọ ikike ahụ ga-enwe oge dị ka ụbọchị 180 site na ụbọchị nnabata ha iji chọpụta ebe ha bu n'obi ịtọzigharị ụlọ ahịa ha. Eweputara ikikere ahụ iji belata ụgwọ ọrụ onye batara ọhụrụ ga-akwụ iji sonye na ụlọ ọrụ na nwere ụgwọ ngwa akwụgaghị akwụghachi $ 5,000. Ndị na-enye ya ikike ga-emegharị ikikere ha kwa afọ na ego $ 60,000. Ka ọ na-erule ọnwa Mee 2020 steeti nwere olile anya na ha ga-enweta akwụkwọ ikikere dị 75.
Ntuziaka maka akwụkwọ nkesa nke okenye
Nke a bụ ikikere nke nwere ndị niile nwere mmasị. Akwụkwọ ikike a ga - eme ka ndị azụmaahịa metụtara ya ịzụta afọ si na ndị na - azụ ihe, ngalaba ebe a na - akọ ugbo, ndị na - ahazi ya ma ọ bụ ndị ọzọ na - anata akwụkwọ. Ensdị akwụkwọ ikike ikikere a nwere ọkụ na-ere ere na ngwaahịa, nyekwa ndị ọzọ na-ere ahịa ma ọ bụ ndị na-azụ ihe. Ndị a ga-aga n'ihu na-eresị ndị ọrịa na-eji mkpụrụ osisi agwọ ọrịa ọnọdụ.
Itinye akwụkwọ maka akwụkwọ ikike ndị mmadụ n'otu n'otu ga-ekeji ụgwọ ngwa ngwa anaghị akwụghachi ụgwọ nke $ 30,000. Ozugbo enyere akwụkwọ ikike ahụ, ndị na-anata ego ga-enweta mmeghari ohuru mgbe otu afọ gachara, nke a ga-efu $ 60,000. E nyelarị ụdị ikikere a n'ofe steeti ahụ na Ngalaba na-enwe olileanya inye ndị ọzọ ikikere 110 ka ọ na-erule 21st ụbọchị nke December 2021.
Atụmatụ azụmaahịa ị ga-achọ inweta akwụkwọ ikike
E nwere njirisi ike echebara ka ị na-akwado ime ngwa gị dị ka onye na-ere cannabis. Ọ bụrụ n’ị na-achọ itinye akwụkwọ ikike maka ya, ị ga-achọ atụmatụ azụmaahịa ndị a;
1. Agba nke atụmatụ ego gị
2. Template nke ire ahia gi
3. Ibido ndekọ nke ndị ọrịa
4. Eserese nke atụmatụ nchekwa
5. Esemokwu kwesịrị ekwesị nke akụrụngwa chọrọ
6. Esemokwu nke atụmatụ mkpara
7. Usoro nke ikuziri ndi oria ihe
8. Template nke njikwa ngwa ahia
9. Eserese nke atụmatụ arụmọrụ
Marijuana maka nzube ntụrụndụ
Mgbe JB Pritzker nwetara oche gọvanọ maka steeti Illinois na 2018, ndị omeiwu gbanwere ngwa ngwa ha na-elekwasị anya na-arụ ọrụ iji mee ka mkpochapụ marijuana nke ntụrụndụ bụrụ iwu. Wepu marijuana na ihe ndi amachibidoro iwu ma weghara ya bu ihe mbu n’ime nkwa nile ndi mmadu n’enye aka n’oge agha ya.
Ọbụna dịka a na-achọ ịnwe iwu ọhụrụ ọ gaghị emetụta mmemme pilot cannabis n'ụzọ ọ bụla. Iwu a kacha elekwasị anya na ịbawanye ọnụ ọgụgụ nke ndị ọbịa na-atụ anya ịrị elu na azụmaahịa cannabis n'agbanyeghị nwayọ na njikwa. Ndị na-achọ ịkwụ ụgwọ ga-anọgide na-enweta ọgwụgwọ kachasị dị ka Ngalaba na-achọpụta ụzọ ndị ọzọ itinye n'ọrụ iwu ọhụrụ nha nha niile na mpaghara niile. N'ihe niile ị choro maka ngwa ihe ịga nke ọma, ndị na-achọ ima elu n'ime ụlọ ọrụ ga-achọ nchikota chi na ezigbo nkwado otu. Ọ na-agbanwe oge na steeti Illinois na ndị nwere ọdịbendị cannabis nwere ike ịtụ anya inweta ihe kachasị mma na ụdị, ngwaahịa, cannabis paraphernalia.
Site na mkpali ziri ezi na ịnweta ihe ndị dị mkpa, ntuziaka a nwere ike inyere gị aka ịga nke ọma ịmalite ngwa ahịa cannabis bara uru na Illinois. Ọ dị mkpa iburu n’obi na usoro a na-ewe oge ọbụlagodi inwere akụ. Nyere usoro ikikere, ichota onodu di nma ma wulite uzo ahia gi iji mezuo ihe steeti, o nwere ike buru ihe kariri otu afo. A na-achịkwa ụlọ ọrụ cannabis nke ukwuu ma nweta enyemaka site na ụlọ ọrụ, a na-atụkwa aro ka ndị ọkachamara na-azụ ahịa.